Xubin ka noqo | Nashville VOAD
Xubinimada Nashville VOAD waxay u aqoonsanaysaa ururkaaga inuu yahay shuraako muhim ah oo bulshada kaalmeeya shaqadeena si aan uga jawaabno musiibada iyo ka caawinta dadaalada soo kabashada bulshooyinkayada.
Waxaan ku martiqaadaynaa dhammaan ururada danaynaya yaraynta iyo yaraynta saamaynta masiibooyinka ee Degmada Davidson inay ku biiraan VOAD, daladda ururada mutadawiciinta, wakaaladaha dawliga ah, iyo ganacsiyada. Hadafkayagu waa in aan kor u qaadno iskaashiga, isgaarsiinta, isuduwidda, iyo iskaashiga si loo kobciyo gaarsiinta waxtarka leh ee adeegyada bulshooyinka ay dhibaatadu saameysey. In kasta oo aan aad ugu firfircoon nahay jawaabta iyo soo kabashada, waxaan ka qaybqaadannaa dhammaan afarta weji ee maaraynta musiibada.
Diyaargaraw – qorshaynta, tababbarka, iyo hawlaha waxbarasho ee la qabtay si loo kordhiyo awooddayada si aan uga jawaabno musiibo;
Yaraynta – tallaabooyinka la qaaday si looga hortago ama loo yareeyo sababta, saamaynta, iyo cawaaqibka masiibooyinka;
Waxqabadka – waxqabadyada ka hadlaya saamaynta muddada-gaaban, tooska ah ee dhacdada oo ay ku jiraan tallaabooyin degdeg ah oo lagu badbaadinayo nolosha, ilaalinta hantida, iyo buuxinta baahiyaha aasaasiga ah ee aadanaha;
Soo kabashada – hawlo mustaqbalka fog ah oo ka shaqeeya soo celinta bulshada caadooyinka musiibada ka hor ama si ka sii wanaagsan.
501(c)(3) ururada leh barnaamijka ka jawaabida musiibada iyo siyaasada u heellanaanta agabka (sida shaqaalaha, lacagaha, qalabka) si loo daboolo baahiyaha dadka meel kasta oo ka tirsan Degmada Davidson ee ay saamaysay musiibo iyadoon takoor lahayn.
Warqadaha iyo macluumaadka xiriirka ka dhig mid casri ah.
Ka qaybgal shirarka guud ee VOAD si joogto ah.
Ka qaybqaado shaqada guddiga iyo layliga tababarka sanadlaha ah.
Ka faa’iidayso Tracker Sadaqo ah si aad isugu duwdo adeegyada kuwa ka badbaaday musiibada.*
Xuquuqda cod bixinta (1 urur kasta)
Helitaanka xogta macmiilka Charity Tracker si loo agaasimo adeegyada musiibada.*
Martiqaadyada shirarka guud, gelida qoraalada kulanka, iyo ku darida liiska qaybinta iimaylka.
Xubinta ku xidhan
Urur kasta oo ka tirsan degmada Davidson oo leh qorshaynta musiibada iyo hawlaha mas’uuliyadaha ama kartida (ay ku jiraan hay’adaha dawladda iyo kuwa aan faa’iido doonka ahayn iyada oo aan laga dhaafin 501 (c) (3) laakiin aan buuxin shuruudaha xubinnimada buuxda iyo / ama aan lahayn awoodda lagu hawlgeliyo si joogto ah.
Ka qayb qaadashada layliga tababarka sanadlaha ah.
Ka qaybgal shirarka oo ka qayb gal guddiyada sida wakhtiga iyo agabku u oggolaadaan.
Helitaanka xogta macmiilka Charity Tracker si loo agaasimo adeegyada musiibada*
Meherad kasta oo ku dhex taal Degmada Davidson oo u heelan rabitaanka ka qaybgalka iyo taageeridda hawlaha u diyaarsanaanta iyo jawaabta VOAD.
Ku bixi taageero mid ama in ka badan oo ka mid ah siyaabahan soo socda:
Amaahso khibrad guddiyada ama shirarka
Ka qaybgal tababarrada
Bixi agabka musiibada
Logo on Nashville VOAD website (taageer ahaan)
Awoodda lagu xidho shabakadayada masiibada.
Fursad lagu soo celin karo bulshada.
* Tracker Sadaqo waxa loogu talagalay wakaaladaha iyo ururada bixiya agabka ama adeegyada badbaadayaasha shakhsi ahaan ama qoys ahaanba musiibada ka dib. Xubnaha aan ku dhicin qaybtaas ma heli doonaan ama lagama fili doono inay isticmaalaan Sadaqo Tracker.